China Hexagonal Wire Netting orinasa sy mpanamboatra |Shengsong
Ny harato hexagonal dia antsoina koa hoe tariby akoho sy harato akoho amam-borona.Izy io dia vita amin'ny tariby vy karbônina manodinkodina, electeur na galvanized mafana, avy eo mifono plastika, na tsotra.Hexagonal tariby harato dia ampiasaina amin'ny zaridaina ho fiarovana vorona kely, na ho toy ny akoho amam-borona na biby kely trano.
Tady akoho, na harato akoho amam-borona, dia tady fampiasa matetika amin'ny fefy biby fiompy.Izy io dia vita amin'ny vy tsy misy pentina manify, malefaka, tariby galvanized na tariby vy karbaona, misy banga hexagonal.Misy amin'ny 1 inch (eo amin'ny 2.5cm eo ho eo) savaivony, 2 inch (eo amin'ny 5cm eo ho eo) ary 1/2 inch (eo amin'ny 1.3cm eo ho eo), ny tariby akoho dia misy amin'ny tariby isan-karazany matetika 19 gauge (eo amin'ny 1mm tariby) hatramin'ny 22 gauge (eo amin'ny 0.7 eo ho eo). tariby mm).
Ny tariby akoho dia ampiasaina indraindray mba hanamboarana tranom-biby malalaka nefa tsy lafo ho an'ny biby madinika (na hiarovana ny zavamaniry sy ny fananana amin'ny biby), ary mety tsy mety ho an'ny biby mora mikiky ny hanim-py sy ny zinc ao amin'ny tariby misy tavy.
tariby akoho, harato bitro, fefy akoho amam-borona, harato rockfall, harato stucco.
Fiarovana fitaovana sy milina, fefy lalambe, fefy kianja filalaovana tennis, fefy fiarovana ho an'ny greenbelt.
Mifehy sy mitarika rano, eny fa na dia ny tondra-drano aza.
Arovy ny tamboho, ny moron-drano, ny fanambanin'ny renirano, ny pier.
Manaova asa maika hafa.
Tambajotra hexagonal vy harato ho an'ny slope shotcrete.
Tambajotra hexagonal galvanisé ho an'ny zavamaniry mihantona.
Hexagonal tariby harato dia vita amin'ny vy tariby sy ny tenona namorona ny tariby harato.Ny harato tariby dia ampiasaina betsaka amin'ny sehatra maro noho ny toetrany.
Fitaovana: Mangatsiaka galvanized, mafana dip galvanized, herinaratra tafo, PVC mifono tariby, sns.
1. Mora ampiasaina ary vita amin'ny taila fotsiny amin'ny rindrina sy ny simenitra fanorenana.
2. Fametrahana tsotra ary tsy mila fahaiza-manao manokana.
3. Tohero ny fahasimbana voajanahary, ny fanoherana ny harafesina ary ny fahafahana manohitra ny toetr'andro ratsy.
4. Izy io dia mahatanty deformation lehibe ary tsy hirodana.
5. Fitehirizana hafanana sy insulation hafanana.
6. Manamaivana ny saran'ny fitaterana.
Hexagonal tariby harato, antsoina koa hoe akoho harato na akoho amam-borona harato dia vita amin'ny lowcarbon lron Wire.mafy orina ny harato ary fisaka.Izy io dia ampiasaina betsaka amin'ny fananganana indostrialy sy fambolena ho fanamafisana sy fefy.Izy io koa dia ampiasaina ho fefy ho an'ny tranom-borona.zaridaina sy kianja filalaovana ankizy.
Amin'ny sehatry ny injeniera, ny harato tariby hexagonal dia ampiharina mba hiarovana sy hanohanana ny tamboho, ny havoana, ny lalana, ny tetezana ary ny injeniera hafa.
Ny orinasanay dia mamatsy karazana karazany sy voafaritra samihafa tariby hexagonal.Ireto misy tafo vy hexagonal tariby harato, PVC mifono hexagonal tariby harato, tenona harato gabion sy ny hafa karazana harato.
Tambajotra tariby hexagonal galvanized
G/SQ.M sakany Wire Gauge (savaivony)
santimetatra mm Fandeferana (mm)
3" 75 mm ±8.0 1.4mm - 30 2' - 2M 20, 19, 18, 17
PVC mifono vy hexagonal harato
harato Wire Gauge (MM) sakany
santimetatra MM - -
izahay koa dia manolotra fepetra hafa ilainao
teo aloha: Fantsika mahazatra
Manaraka: Wire Black Annealed